Shiinaha dahaaran Bacda meeldhexaadka ah 32-Soo-saaridda iyo Warshad | Kinghow
Naqshadda ballaadhan ee furitaanka ayaa ka dhigaysa in wax la soo qaado, xitaa haddii aad waxyaabo badan dhigto waxaad arki kartaa waxaad u baahan tahay markaad jaleecdo. Waa lagu qaadi karaa garbaha si loo xorayn gacmahaaga. Loogu talagalay suuf qaro weyn si loo yareeyo cadaadiska garabka.
Waxyaabaha Bag Boorsada Qabow
AWOODA BADAN: Bacda qaboojiyaha ayaa mug ahaan ku hayn kara ilaa 23 litir (6 galaan). Waxaad qaadan kartaa 32 gasac oo ah cabitaannada aad ugu jeceshahay oo lagu daray baraf. Labada qaybood ee dahaaran waxay u oggolaanayaan inay xirxiraan cabitaanno laga soocay cuntada qalalan. Cabirka guud waa qiyaastii 14.9 x 8.6 x 11 inji / 38 x 22 x 28 cm (L x W x H). Waxay ku habboon tahay qoyskaaga oo dhan dalxiis ahaan ama inaad buuxiso cunno fudud oo loogu talagalay tababbarka isboortiga dhallinyarada ee dibedda, xeebta, kaamamaynta, socodka, gadaal, ciyaarta kubbadda cagta iyo iwm.
DAARKA LEAKPROOF: Banaanka bacda qaboojiyaha waxaa laga dhisay cufnaan sare, biyo u adkaysta, marada wasakhda aan caddeyn lahayn ee Oxford taasoo ka dhigaysa mid waara, aan biyo lahayn oo sahlan in la nadiifiyo. Laga soo cusbooneysiiyay dhismaha tolidda dhaqanka, qaybta hoose waxay qaadataa tiknoolajiyad cadaadis kulul si ay ugu xirto dahaadhka si habsami leh u siinaya leakproofness aad u fiican.
WAQTIGI INTAA LAGA SAMEEYAY: Qaybta sare waxay isticmaashaa 210D dhar Oxford iyo EPE xumbo si ay u keydiso walxaha qalalan, qeybta hoose waxay u isticmaalaan maaddada Qalabka-dahsoon ee High-censity and linak proof proof in the bag inay wada shaqeeyaan si loo hubiyo inay cuntada ka dhigeyso mid qabow oo cusub. 12 saacadood. Waxaa loo isticmaali karaa adeegyada gudbinta cuntada iyo xalka weyn in cuntada laga soo qaado bakhaarka dukaanka.
JAWAAB BADAN: Waxaa lagu qalabeeyaa 1 jeebka kore oo ballaaran, 2 jeebka dhinac ah, iyo 2 jeebabka hore ah, jeebadaha badan ayaa buuxin kara baahiyaha kaydinta alaabada kala duwan. Waxay u isticmaali kartaa boorsadaada khaaska ah. Loogu talagalay oo leh gacan qabasho iyo suunka garbaha oo kala bixi kara oo bixiya 3 qaabab qaadis ah. Waxaad dooran kartaa inaad gacanta ku qaadatid ama aad ku qaadatid suunka garbaha. Waxaad sidoo kale ku ridi kartaa boorsadan shandadaada safarka sidoo kale.
ISTICMAALKA KOOXDA AH: Bacdan qaboojiyaha waxaa lagu buuxin karaa qado iyo xoogaa baakado baraf ah oo loogu talagalay kaamamka, waxaana lagu ridi karaa jirridda SUV-gaaga sidoo kale. Markaad safar ku raaceyso diyaarad, way isku laaban kartaa iyadoo ku laasan karto shandadaada.
Dareeraha Boorsada Isku-Xidha Kala-gooyaha
Bac qaboojiyaha - Kaydinta Cabitaanka iyo Cabitaanka ee Gol ...